अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले सिरियामाथि संयुक्त सैन्य आक्रमण ! – Aawaj Media
अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले सिरियामाथि संयुक्त सैन्य आक्रमण !
Home /विश्व/अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले सिरियामाथि संयुक्त सैन्य आक्रमण !
साथै सिरियामा भएको संदिग्ध रासायनिक हतियारको प्रयोग पूर्वी रुसी जाजुसमा
थि भएको आक्रमणसँग जोडिएको बताइन् । प्रधानमन्त्री मेले विश्वमा रासायनिक हतियार प्रयोग रोक्न कानुन बनाउन समेत माग गरेकी छन् ।
हजारौँ पैसा फल्ने रुख बेलायतमा
एउटै फार्मबाट ५ करोडको अर्गानिक कफी विदेश निर्यात गर्छन्